I-Apple Maps sele inika ulwazi ngothutho lukawonkewonke eSingapore | Ndisuka mac
I-Apple Maps ngoku inika ulwazi ngezothutho lukawonkewonke eSingapore
Okwangoku izicwangciso zika-Apple nge-Apple Maps zibonakala ngathi zithothisiwe ukusukela ekuqaleni konyaka. Ukusukela ngoJanuwari besineendaba ezincinci ezinxulumene nezicwangciso zika-Apple zokongeza ulwazi kwezothutho zikawonke-wonke kwizixeko apho zingafumanekiyo ngaphaya kwamarhe. Amarhe amva nje, ahambelana nolu hlobo lolwazi, aqinisekisa ukuba iMadrid iya kuba sisixeko sokuqala saseSpain ukonwabela lo msebenzi. Kodwa ukuza kuthi ga ngoku asikaze sive nto ngakumbi ngalo mhla. Amakhwenkwe eCupertino Bangeze nje ulwazi ngezothutho lukawonkewonke eSingapore, ilizwe eliza kuvula iVenkile yeApple yokuqala kwiiveki ezimbalwa.
Okwangoku olu lwazi lufumaneka kuphela kwikomkhulu kodwa ngokuhamba kwexesha, ngokwe-Apple, iya kuthi yande iye kwimimandla engabamelwane, eya kuthi ivumele abasebenzisi beemveliso zeApple ukuba bahambe ngaphandle kokusebenzisa eyabo imoto, irente okanye ikhabhathi. I-Apple Maps ibonelela ngolwazi malunga ne-MRT (Mass Rapid Transit), inkqubo yothutho lukawonkewonke enikezela unxibelelwano phantse kuso sonke isixeko. Imigca nganye yezothutho iboniswe ngombala owahlukileyo ukuze abasebenzisi bakwazi ukuwachonga ngokukhawuleza.
Ukongeza, iiNqaku zoMdla zongeziwe, apho iApple ibalaselisa iindawo eziphambili esixekweni ukuba siyandwendwela. Izixeko zokugqibela apho iApple ibonelela ngolu hlobo lolwazi yiDetroit neMichigan eUnited States naseWindsor naseOntario eCanada. U-Apple waqala ukubonelela ngolu hlobo lolwazi ngokusungulwa kwe-iOS 9, enikezela olu hlobo lolwazi ekuqaleni kwinani elikhulu leedolophu zaseMelika nezaseTshayina, enye yezinto eziphambili kuApple, xa imakethi yaseAsia yaba yenye yemithombo yenkampani ephambili yemali engenayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple Maps ngoku inika ulwazi ngezothutho lukawonkewonke eSingapore
Hlaziya umbala, phumla ukupeyinta kwi-Mac yakho ngoku simahla ixesha elilinganiselweyo
Ngomhla we-16 kuMeyi ezona ndawo zakudala zeApple Stores ziya kufumana ukuphakanyiswa kobuso